मौलिकता हराएको नेपाली विज्ञापन |
मौलिकता हराएको नेपाली विज्ञापन
कमल योन्जन लेखक
नेपालमा हरेक क्षेत्र तथा विधाहरुमा मौलिकताको कुरा उठिरहँदा नेपाली विज्ञापन क्षेत्र त्यसबाट अछुटो रहने कुरा नै भएन । स्वभाविक रुपले नेपाली विज्ञापन क्षेत्रमा पनि मौलिकताको कुरा उठ्ने नै भए, उठीरहेकै छन् र उठाइरहकै छन् ।
विज्ञापनमा नेपाली मौलिकता हुनु पर्ने कुरामा कसैको दुई मत छैन । विज्ञापनमा मौलिकताको कुरा उठाउनेहरु पनि छन् । यो सर्वस्वीकार्य विषय पनि हो र हुनु पर्दछ । तर, विज्ञापनमा मौलिकता के हो ? विज्ञापनमा मौलिकता कसरी दिन सकिन्छ त ? के गर्दा विज्ञापनमा नेपाली मौलिकता झल्किन्छ ? हामीले विज्ञापनमा मौलिकता किन दिन सकिरहेका छैनौं ? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोजिरहेका छौं अहिले हामी । अहिलेको वहसको मूल विषय नै यही हो । धेरैले उठाइएका र उठ्ने गरेका प्रश्न यी नै हुन् ।
अहिले नेपालमा निर्माण हुने गरेका अधिकांश विज्ञापनहरु छिमेकी मुलुक भारत, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, भियतनाम, थाइल्याण्डमा बनेका विज्ञापनलाई हेरेर त्यसैको आधारमा निर्माण हुने गर्दछन् । त्यही विज्ञापनहरु टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिकादेखि समाजिक सञ्जालहरु मार्फत् प्रशारण र प्रकाशन हुने गर्दछ । त्यसैको माध्यमबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरुको प्रवद्र्धन तथा बेचबिखन हुने गर्दछ ।
नेपाली समाज, भाषा-संस्कृति, रहनसहन, खानपान हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुको भन्दा भिन्न छ । यो हाम्रो मौलिकता हो, हाम्रो पहिचान पनि हो । तर, हाम्रा विज्ञापन निर्माताहरुले त्यसलाई बुझ्न सकेका छैनन् ? वा बुझेर पनि बेवास्ता गरिरहेकाछन् ? उनीहरु त्यसलाई बिर्सेर विज्ञापन निर्माण गर्दै आइरहेका छन् । यो गम्भीर विषय हो ।
नेपाली विज्ञापन बजारले वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन तथा विक्री वितरणका लागि छिमेकी मुलुकमा बनेका विज्ञापनहरु र विदेशी लेखकहरुले लेखेका पुस्तकहरु पढेर त्यसकै आधारमा विज्ञापनहरु निर्माण गर्ने गरेका छन् । विदेशी लेखकका पुस्तकहरु पढ्नु खराब कुरा होइन । सैद्धान्तिक आधारहरु तिनै पुस्तकहरु हुन् र तिनै पुस्तकबाट सिक्ने पनि हुन् । त्यसबाट सिक्नु राम्रो हो तर त्यसैको हुबहु नक्कल व्यवहारमा उतार्नु भने खराब हो । अहिले त्यही भैराखेको छ, गरिराखेको छ ।
भारतमा पनि ८० को दशकसम्म अंग्रेजी लेखकहरुको पुस्तकहरुबाट विज्ञापन निर्माताहरु बाहिर आउन सकेका थिएनन् । ग्राहक चाहन्थ्यो विज्ञापनमा भारतको भाषा, संस्कृति, रहनसहन आओस् । तर, विज्ञापन निर्माताहरुको टाउकोमा भने अंगे्रजी भूत सवार थियो । तर, त्यसबीच पनि केहि यस्ता विज्ञापन निर्माताहरु निस्किए जसले भारतीय विज्ञापन निर्माणको स्वरुपमै परिवर्तन ल्याइदिए । विज्ञापनमा भारतीय मौलिकता भाषा, संस्कृति, भेषभूषालाई र भौगोलिकतालाई समेट्ने कार्य भयो । भनौ उनीहरुले लक्षित समूहलाई मध्यनजर गरी विज्ञापन निर्माण गरे ।
अहिले नेपाली विज्ञापन बजार भारतको ८० को दशकको विज्ञापन बजार जस्तै स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाली विज्ञापन बजारमा ‘आउट अफ द बक्स’को कुरा त गर्छौैैँ तर ‘इनबक्स’मै अल्झिरहेका छौँ ।
देशको भावना र आत्मलाई विज्ञापनको कथामा ल्याउने प्रयास नै गरेनौं हामीले । नेपाली विज्ञापन निर्माताहरुले विज्ञापन बजारलाई जहिले पनि रोटी सेक्ने काममा मात्र उपयोग गर्यो जसले गर्दा सिर्जनात्मकता एउटा कुनामा थन्कियो ।
विज्ञापन भनेको व्यवसायीकता मात्र होइन कला पनि हो । भलै यो विशुद्ध कला होइन । व्यवसायीक कलामा काम गर्नेहरुले अरुको भावनालाई कदर गर्दै, अरुको भावनालाई बुझ्दै काम गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो हाम्रो कामहरुमा पाउँदैनौं । नेपाली विज्ञापनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले कसका लागि र केका लागि विज्ञापन बनाइ रहेका छौं ? भन्ने नै सोचेन ।
संसारमा अधिकांश मानिसहरुको भोगाइ उस्ता उस्तै हुन्छन् । विषय वस्तुहरुमा विविधता हुन सक्छन् । इच्छा, आकांक्षा, सपना, दुःख, पिडा संसार भरी सायद एउटै प्रकारको हुन्छन् । फरक भूगोल र समाज मात्र हो । भूगोल र समाज अनुसार त्यसको आकार प्रकारमा विविधता अवश्य हुन्छन् नै । तर भावनात्म पक्ष एकै प्रकारको हुने गर्दछ ।
किन त्यो विषय वस्तु र नयाँ सिर्जनाहरु हाम्रो विज्ञापनमा आउन सकेको छैन ? विज्ञापनमा मौलिकता चाँहि त्यसको स्वरुपसँग हुने गर्दछ । त्यही स्वरुपसँग नेपाली भावना, माटो, सहरसहन, संस्कृतिलगायत हाल्न सक्यौं भने त्यही हो नेपाली मौलिकता । यसमा हाम्रो अहिलेको बजारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
विज्ञापनलाई लक्षित समूहले आत्मसाथ गर्दैन भने त्यो विज्ञापन फजुल खर्च मात्र हो । हामी त्यही गरिरहेका छौं । हामी हाम्रो विज्ञापनमा कहाँनिर चुक्यौं त ? नेपाली विज्ञापन निर्माताहरुले विज्ञापन निर्माण गर्दा कहिल्यै आफ्नो माटोको कुरा गरेन । विज्ञापनमा लक्षित समूहको कथा बुनेन । काम गर्यौं तर उत्तरआधुनिक बन्ने सोचका साथ यथार्थ धरातल बिर्सियौं । होडबाजि त गर्यौं तर जमीन बिनाको । आधारभूमि बिनाको प्रतिस्पर्धा मौलिकता बिनाका नाच मात्र हुन् । अरुको कला, संस्कृतिलाई अंगालेर आफ्नो जग खोज्नु मुर्खता सिवाय केहि हुँदैन । अहिलेको नेपाली विज्ञापनको अवस्था त्यही हो ।